10 carruurta ugu fiican 'Xbox 360 iyo Kinect Games si ay u iibsadaan sanadka 2018
10ka Carruurta Ugu Fiican 'Xbox 360 iyo Kinect Games si loogu iibsado 2018
Ka ilaali caruurtaada inay ciyaaraan cayaaraha ugu xiisaha badan
Carruurtu waxay jecel yihiin ciyaaraha video. Sidoo kale ma aha inay saameyn xun ama saameyn xun ku yeeshaan carruurta, sidoo kale. Haatan waxan ka helnay warshadaha in ciyaaraha loo isticmaalo dugsiyada sida dariiqa wax lagu baro, kordhinta hal abuurka xitaa xitaa iyaga ku tababaray inay noqdaan naqshado iyo naqshadeeyayaasha mustaqbalka. Ciyaaraha fiidiyowga ayaa sidoo kale carruurta ka qaadi kara sariirta ayna u leeyihiin inay ku tababaraan ayna bartaan dhaqdhaqaaqyo qoob-ka-cayaar oo cusub, xalliyaan qorshayaasha isku dhafka ee adag, iyaga oo siinaya dareen daaweyn iyo kor u qaad xirfadahooda.
Hoos waxaa ku xusan liiska 10ka ciyaartoy ee ugu fiican caruurta 'Xbox 360 iyo Kinect'. Laakiin cayaaraha ma ahan kuwa kaliya ee loogu talagalay caruurta, maaddaama qaar badan oo ka mid ahi ay ku fiicanyihiin inaad ku soo biirto waqtiyada wanaagsan iyo abuuritaanka khibrad qoys oo xiriir la leh. Haddaba akhri si aad u aragto kuwaas oo ah kuwa iska leh.
The Sonic Ultimate Collection waa soo ururinta qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee SEGA oo loo yaqaan 'Yugeryear'. Waxaad u muujin kartaa carruurtaada magacyadii 90s iyo waxa aad ciyaareysaan markaad da 'ahaan jirtey. 40ka kulan ee lagu daray, waxaad ka ciyaari kartaa noocyada noocan oo kale ah sida Streets of Rage 2 , Sonic The Hedgehog iyo in ka badan. Saaxiibada iyo qoysku waxay ciyaari karaan labo dabaq oo kala duwan sida Golden Ax. Isticmaalayaasha Amazon ee soo iibsaday ciyaarta waxay jecel yihiin qiimaha la heli karo iyo xulashada ciyaarta. Dib-u-eegis xeel-dheer oo aan jeclayn ma jecla casriyeynta casriga ah
Forza Motorsport 4 waa ciyaarta tartanka kama dambaysta ah ee loogu talagalay Xbox 360, oo leh in ka badan 500 baabuur oo dhab ah oo nolosha ah iyo 26 tartan weyn oo tartan ah. Ciyaar kasta oo gaar ah ayaa lagu soo dhaweyn doonaa Forza Motorsport 4, maadaama uu yahay mid ka mid ah ciyaaraha casriga ah ee ugu caansan abid.
Taxanaha Forza Motorsport waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay tartan tartan ah, iyadoo xoogga la saarayo samaynta baabuurta, dareemaan, eegaan, oo u cadeeyaan sida ay u eg yihiin noloshooda dhabta ah. Fikradda ujeeddadeedu waa mid faahfaahsan iyo jaantusyo ujeeddadeedu tahay in la siiyo ciyaartoyga waayo-aragnimada ugu muhiimsan ee wadista gaari-ga. Ciyaartoyda ayaa awood u leh in ay sawiradooda ku dhajiyaan muuqaal cockpit si ay u kordhiyaan xaqiiqada, iyagoo arkaya inay gacmahooda darawalkoodu u dhaqdhaqaaqaan si isku xigxigaan kantaroolka ciyaaryahanka. Waxa kale oo ay ku habboon tahay Xbox 360 ee Kinect, sidaa daraadeed waxaad ku xiran kartaa muraayad maskaxeed oo khayaali ah oo baabuur wata.
Raadinta ciyaar fiidiyoow ah oo dhiirigeliya fikirka muhiimka ah iyo xalinta dhibaatada? Xariirka 2aad waa cayaar ficil ah oo lagu soo bandhigay fiidiyoow kaas oo soo bandhigaya ciyaar degenaansho leh oo leh xujooyin xiiso leh oo ku lug leh taleefanka. In ka badan 2,500 oo macalimiin ah oo Mareykanka ah ayaa isticmaaley Portal 2 iyaga oo ku jira qorshahooda casharradooda. "In la baro Portals" waxaa lagu soo bandhigay shirkadda Vault ee dugsiyada si ay u barato ardayda inay ku baraan xiisaha xallinta maskaxda iyo abuurista ciyaarta ciyaaraha. Isticmaalayaasha Amazon ee soo iibsaday Portal 2 waxay jecel yihiin ciyaar-qabadkeeda. Dib-u-hubin muhiim ah ayaa sheegaya in ay noqon karto mid aad u heer sareeya caruurta yar yar.
Ilmahaagu ma yahay taageere Jurassic World iyo LEGOS? LEGO Jurassic World wuxuu soo jiitaa labada adduunba ugu wanaagsan adigoo u ogolaanaya inaad ku soo celiso daqiiqado muhiim ah dhamaan afarta jurasiis ee Jurassic oo lagu soo koobay foomka LEGO. Ciyaarta sahlan ee lagu ciyaaro sanduuqa sanduuqa ciyaaraha fudud wuxuu kudhex gashaa multiplayer, sidaa darteed adiga iyo caruurtuba waxay ku riyaaqi karaan inay ka baxsadaan dinosauryada iyo xalinta xujooyinka. Uma baahnid inaad noqotid aadanaha, sidoo kale. Waxaa jira xulasho ballaaran oo ah 20 dinosaurs kala duwan oo u ciyaara, sida T. Rex. Isticmaalayaasha Amazon waxay jecel yihiin in ay tahay ciyaar fudud oo fudud. Xaalad aad u daran ayaa leh in ciyaarta ay noqon karto buggy yar oo gaaban.
Madden NFL 17 ayaa kuu ogolaatay in aad ciyaarto sida ciyaarta haddii aad dhab ahaantii daawaneyso ciyaar kubadeed oo dhab ah. Iyada oo muuqaalkeeda cajiibka ah ee la midka ah, boqolaal istaraatijiyadood oo kala duwan, iyo ficil isboorti oo aad u adag, Madden NFL 17 ayaa liiska ugu fiican ku leh Xbox 360 ciyaaraha isboortiga.
Madden NFL 17 ayaa kuu ogolaaneysa inaad ka mid noqoto 32 kooxood oo rasmi ah oo NFL ah, markaa ugu dambeyntii waxaad dejin kartaa dhibcaha isla markaana waxaad dhigeysaa mid kasta oo ciyaaraha ah iyo Super Bowl Championship mar iyo dhamaanba. Ciyaartoydu waxay dooran karaan noocyada kala duwan ee cayaaraha sida franchise, halkaas oo ay tahay inay horumariyaan niyadda kooxda, tababaraan wareega wareega iyo dhisida buug-yar-yar oo leh istaraatiijiyado kala duwan. Madden NFL 17 waxaa ku jira faallo dhab ah oo laga duubay ka soo baxa cayaaraha dhabta ah ee cayaaraha, iyagoo siinaya aragtida ah inay daawadaan ciyaarta aad ciyaareyso. Ciyaartoyda ayaa xitaa la siiyay fursad ay ku qoraan ciyaartoydooda ugu caansan inay noqdaan kooxda ugu dambeysa ee qaab ciyaareedka kubada cagta.
Waalidiinta intooda badani waxay yaqaanaan barnaamijka caanka ah ee caanka ah, carruurtuna waxay xiiso gelin doonaan khibradda fudud ee jimicsiga ee Xbox 360. Wheel of Fortune waxay yimaadaan Xbox 360 oo leh in ka badan 1,000 puzzles si ay u xalliyaan oo ay ku jirto habka multiplayer si loo wada qoyska wada jir.
In la keeno noloshiisa TV-ga, Wheel of Fortune wuxuu bixiyaa baraarujinta gawaarida ee abaalmarinta iyo lacag caddaan ah marka lagu xalinayo caqabadda erayga. Ciyaartoyda ayaa awood u leh in ay iskood isu tashadaan iyagoo qaabeeya qaab cayaareed oo badan oo leh afar ciyaaryahan. Pat Sajak iyo Vanna White waxay u muuqdaan kuwo muuqaal ah waxayna leeyihiin codad iyaga u gaar ah si ay khibrad uga helaan. Ciyaarta waxaa sidoo kale ka mid ah fiidiyowyo fiidiyow iyo minigames kuwaas oo u dhaqma sida "fasax ganacsi" si ay u siiyaan ciyaarta nolol aad u badan oo la mid ah sida haddii aad dhab ahaantii daawashada bandhigga.
Ku Fiican Qoysaska, Daqiiqada Si Win Win Waxay ku saleysantahay bandhiga ciyaaraha NBC ee caanka ah waxayna ka buuxsanyihiin daraasado xiiso badan oo xiiso leh oo qoysaska oo dhan ay fahmi karaan oo ay si dhakhso ah u qaadan karaan. Xbox Kinect Game waxaa ka mid ah 10 habab oo ciyaaraha ah sida cayaaryahan hal cayaar, waji-furan oo badan iyo wada-shaqeyn. Waxaa ugu fiican dhamaantiis, guus Fiineeye Guy Fieri waa marti.
Daqiiqada si aad u guuleysato Waxaad kula tartami doontaa afar ciyaaryahan oo kale 20 cidhiidhi ah iyo 9 minigames si looga guuleysto $ 1 milyan oo abaalmarin weyn. Isticmaalka Kinect, illaa afar ciyaaryahan ayaa ku boodi kara ciyaarta, iyaga oo isticmaalaya jidhkooda si ay u guuraan, miisaamaan sheyga ama joogaan si ay u dhamaystiraan caqabado kala duwan. Dharbaaxa dareen kasta wuxuu siinayaa ciyaartoyda 60 ilbiriqsi si ay u dhamaystiraan, iyada oo laga bilaabo inay sameeyaan xayawaan caan ah oo wanaagsan si ay u qabtaan kubbadaha hawada ku jira baaldi madaxaaga ah.
Kinectimals waa ciyaar iskudhaf ah oo ku lug leh qaadashada xayawaan tifaftiran ah, oo la ciyaara isla markaana socdo. Waxay u furan tahay fikradda carruurta ee doonaya in ay sii koraan xayawaanka iyo iyaga oo tababaraya. Carruurta jecel xawayaanka ayaa jecel Kinectimals. Cayaartu waxay ku bilaabataa iyadoo la soo qaado oo magaceeda lagu magacaabo mid ka mid ah 20 xayawaan oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin xayawaan, qoob ka ciyaarka iyo libaax. Caruurtaadu waxay ku wici karaan xayawaankooda cusub ee loo yaqaan "virtual art by name", iyaga oo baraya hilibka sida soo qaadashada iyo soo rogista iyo xitaa iyaga ku tababaraan koorsooyinka dhaqdhaqaaqa. Waalidiinta soo iibsaday Kinectimals waxay jecel yihiin sida ciyaarta ay dhiirigelinayso isdhexgalka, jimicsiga iyo jacaylka xayawaanka. Dib-u-eegis culus ayaa sheegay in ay tahay mid caqli-gal ah oo gaabis ah.
Minecraft waa ciyaarta ugu fiican ee ilmo kasta oo doonaya in uu ku dhiso wax kasta oo ka mid ah dhismooyinka iyo tago hindisaha. Carruurtu waxay sahamin karaan aduunyo kala duwan oo ka dhasha wax kasta oo ka soo jeeda guryaha ilaa muraayadda. Minecraft Xbox 360 Edition waxay ka kooban tahay qaab waxbarasho oo baraya asaaska si loo barto xirfadaha muhiimka ah. Habkan, caruurtu waxay baran doonaan sida loo farsamaynayo oo loo dhisi karo waxyaabo muhiim ah si loo dhamaystiro ujeeddooyinka. Habka wax-soo-saarka ahi wuxuu bixiyaa kheyraad aan xadidnayn oo lagu dhisi karo aduunkaaga riyadiisa oo aan cadaadis lahayn. Isticmaalayaasha Amazon waxay jecel yihiin inay dhiirigeliyaan hal-abuurka. Dib-u-eegayaasha khatarta ah waxay yiraahdaan waxay noqon kartaa caajis iyo hab-nololeedku waa mid aad u naxdin badan.
Ka sokow helitaanka jimicsiga ka guuritaanka, ilmahaagu wuxuu baran karaa xirfad cusub oo kor u qaadi doona kalsoonidiisa. Qoob-ka-cayaarka 2017 ayaa adiga iyo dhallaankaaga ka dhigaya sariiro iyo qoob ka ciyaarka ciyaaraha caanka ah. Haddii caruurtu ay firfircoon yihiin, markaa cayaaraha tartanka ah ee tartanka ku salaysan wuxuu sii hayn doonaa iyaga mashquul, isagoo xiiso leh oo xiiso leh. Kamaradda Kinect waxay kor u qaadeysaa dhaqdhaqaaqyadooda, dhibcahana waa loo qoondeeyey iyada oo saldhig u ah sida ay u cayaarayaan. Waalidiinta Amazon ee soo iibsaday jacaylka ciyaaraha ah ee ka dhigaya isku-darka isku xirka. Dib-u-eegeyaasha muhiimka ah ayaa sheegaya in xulashada heesaha aysan ahayn mid ballaaran.
Marka, qoraalladayada khibradda leh waxaa ka go'an inay cilmi baarista iyo qorista fikrado iyo tifaftiri madaxbannaan oo ku saabsan waxyaabaha ugu fiican noloshaada iyo qoyskaaga. Haddii aad jeceshahay waxa aan qabano, waxaad naga taageeri kartaa xiriirkayaga aan doortay, kaas oo naga helaya guddi. Wax badan ka baro nidaamka dib u eegista .
Lego Star Wars 3: Khiyaamada Khiyaamada Clone - Xbox 360
Labada Xeer ee Adduunka ee Khiyaamada Xoogsatada Xbox 360
Tartanka 10aad ee Best Xbox Games ee ugu Fiican
Xbox Hal Tilmaamaha Habboon ee HDD
Sida Looga Dhaafo Realtorka: Tilmaamaha Hagaha
Grand Theft Auto: Ku xigeenka City Cheats ee Xbox
Top Ten Xbox 360 Ciyaar Dhamaan Tilaabada
Sida loo Xaqiijiyo Kumbuyuutarkaaga si aad u Cayaartid Muusikada Ventrilo
Dib-u-eegidda Halo P 7 Dib u eegid: Ciladda Stereo iyo Tiyatigga Aqoonta
Sida loo dhagaysto Podcasts
Isbedel Dhamaan Isbeddel Loogu Sameeyaa - On - Bedelaad Amar kasta ee Muujiyaha
Muuqaal Muuqaal Sawireed ee loogu talagalay Gurigaaga Tiyaatarka Masraxa
Meelaha Caalamiga ah ee Shabakadaha Bulshada ee Caalamka
Waa Maxay ObrD-II Scanner?
Sidee loo soo qaadan karaa buug-yaraha iPad-ka
Wareegyada Wanaagsan ee Soodhiyirka ah iyo Qalabka
Sidee loo soo dhejiyay 'Book Express Address Book'
Sida loo-soo-diro Email ah Muuqaalka
Maxay Tilmaamaha Telegram?
Tilmaamaha Dhameystiran ee Wii Ciyaaraha Ciyaaraha
Maxay Toogeeye Keylogger?
IPod nano: Wax kasta oo aad u Baahantahay inaad ogaatid
Tusiyaha Hagaajinta Muusikada Dijital ah
Helitaanka AOL Email Account Iyadoo Muuqaalka
Hantida Vizio 2016 ee E-Serif LED / LCD TV
'Super C' Cheats ee Nintendo Wii
Ka ilaali carruurta inaad ka soo baxdo qaabka aad ku isticmaashay qaabka martida